“Waa in la kala dirro komishan maamul wanaaga Maadaama”… Maxamed Sadiiq Dhame |
“Waa in la kala dirro komishan maamul wanaaga Maadaama”… Maxamed Sadiiq Dhame
Hargeisa(GNN):-“Xog-hayaha arrimaha bulshadda xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI Maxamed Sadiiq Dhame, ayaa ka hadlay khilaafka ka dhex taagan xubnaha komishan maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee Somaliland.
Kadib markii xubnaha guddigaasi ay sheegeen laba maalmood ka hor in ay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii komishankaasi, isla markaana ay doorteen guddoomiye cusub.
Maxamed Sadiiq Dhamme, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa ayaa dhaliilay nidaamka maamul iyo shaqo ee guddigaasi oo hadda jira muddo toban sanadood.
Waxaanu guddigaasi ku dhaliilay in mudadda ay jireen aanay mar naba soo saarin wax warbixin ah oo la xidhiidha hawlo musuq maasuq oo ay ku kaceen haayadaha iyo wasaarradaha dawladda ee xukuumadda Somaliland.
Xog-hayaha arrimaha bulshadda xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI ayaa ku baaqay in la kala tiro komishanka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee Somaliland, maadaama oo ay ka gaabiyeen shaqadii loo igmaday.
Geesta kale Sadiiq Dhame, waxa kaloo uu sheegay in guddoomiyihii hore ee komishanka maamul-wanaagga xilka laga qaaday isagoo Salaad ku maqan, halka masuulkii horena xilka laga qaaday isagoo Quraac ku maqan.